यसरी विकास हुदैछ दशै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
यसरी विकास हुदैछ दशै
Published On : १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:१७
हिन्दू नेपालीहरुको महान चाड दशै चलिरहेको छ ।
फूलपाती, महाअष्टमी, महानवमी, विजया दशमी जस्ता विशिष्ट दिन आउदै छ । काम विशेषले देशका ठूला सहर तथा विदेशमा गएकाहरु दशैं मनाउनका लागि यतिबेला गाउँघर फर्किरहेका छन् ।
पहिले मिठो खान, राम्रो लगाउन र रमाइलो गर्नका लागि दशैं, तिहार मनाउने गरिन्थ्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले एकाधबाहेक प्रायले मिठो खानका लागि दशैं, तिहार पर्खदैनन्, न राम्रो लगाउनका लागि चाडबाड पर्खन्छन् । आधुनिक प्रविधिको विकाससंगै रमाइलो गर्नका लागि पनि चाडबाड पर्खनु पर्ने अबस्था छैन ।
यसको महत्व फरक किसिमले बढ्दै गएको छ । विदेशीले क्रिसमसलाई कसरी विशेष बनाइरहेका छन् भन्ने सूचना, सञ्चारका साधनबाट सिकेका नेपालीले दशैं तिहारलाई आफ्नो पहिचानका रुपमा लिन थालेका छन् । आफ्नो स्वत्वलाई उच्च राख्नका लागि चाडबाड मनाउनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ । त्यस्तै यो बेला कामबश यत्रतत्र गएकाहरु भेला हुने, भेटघाट हुने पर्वका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
बिगतमा जस्तो टोलटोलका बीच काटमार, ग्याङफाइट, चोरी तथा लुटपाट पनि अहिलेका चाडबाडमा कम हुदै गएका छन् । शिक्षाको विकास हुनु, मान्छे सचेत र सभ्य हुदै जानुले पनि यस्ता घटनामा कमी भएको हो ।
अबका चाडबाड शिष्ट, सभ्य, सुखद, रमाइलोका साथ मनाउनु पर्छ । आम हिन्दू नेपालीजनमा विजया दशमीको शुभकामना ।